कलिनिन्ग्राद जनसंख्या संख्या: गतिशीलता, सुविधाहरू, जीवन को गुणवत्ता
समाचार र समाज, अर्थव्यवस्था
कलिनिन्ग्राद - एक विशेष शहर। यसको इतिहास, भौगोलिक स्थान, जलवायु अन्य रूसी शहर देखि धेरै फरक छ। हामीलाई कलिनिन्ग्राद जनसंख्याको के नम्बर, यसको डेमोग्राफिक विशेषताहरु र मानिसहरूको जीवन को अवस्था भन्नुहोस्।
रूसी संघ को पश्चिम मा मात्र समुद्र द्वारा देश बाँकी संग जडान कि शहर हो। यो polueksklav - कलिनिन्ग्राद। सम्झैताको को बाल्टिक सागर मा नदी Pregel को confluence मा स्थित थियो। नदीको बैंकहरू मा सुविधाजनक स्थान मानिसहरूलाई लामो बसोबास छ। पहिलो settlers कांस्य आयु यहाँ बस्थे। स्थायी बन्दोबस्त6शताब्दी मा देखियो।
जर्मन, पोलिस, लिथुआनियाली: शहर को इतिहास फरक संस्कृतिका साथ जोडिएको छ। शहर को गठन र विकास मा एक महत्वपूर्ण भूमिका Teutonic आदेश प्ले। कलिनिन्ग्राद सबैभन्दा खराब जो को द्वितीय विश्व युद्ध थियो धेरै विनाशकारी युद्ध, अनुभव छ। शहर सोभियत संघ को भाग भयो र नयाँ जीवन सुरु गरेपछि। इतिहास को सबै भन्दा भर कलिनिन्ग्राद (Koenigsberg) मा जनसंख्याको संख्या, हुर्किसकेका छ यो असाध्यै सुविधाजनक भौगोलिक स्थान योगदान गरेको छ।
जलवायु र वातावरण
कलिनिन्ग्राद जहाँ, धन्यवाद न्यानो खाडी स्ट्रिम गर्न, वर्ष-राउन्ड तापमान सहज राखिएको छ उत्तरी अक्षांश, मा स्थित छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद। तर, यो क्षेत्रको सुविधाहरू एकदम उच्च आर्द्रता, वार्षिक वर्षा वर्षा को बारेमा 800 मिमी छ। Kaliningrad, कुनै गर्मी र तीतो चिसो छ। गर्मी थर्मामीटर, 18 डिग्री सेल्सियस को एक औसत स्तरमा rises को हिउँदमा -0...-2डिग्री पर्छ।
कलिनिन्ग्राद शहर को जनसंख्या उमेर उमेर देखि निरंतर बढ्छ भनेर यस्तो नम्र मौसम, क्षेत्र बासिन्दाहरू आकर्षित। आज शहर प्रवासिहरु लागि आकर्षक गन्तव्य हो। मान्छे को थुप्रैले तापनि शहर मा वातावरण सामान्य दायरा भित्र छ। निस्सन्देह, कार को संख्या वृद्धि हावा प्रदूषित बनाउँछ, तर सामान्य मा यो महत्वपूर्ण छ। शहर मा कुनै खतरनाक उद्योग, त्यसैले पानी छन् र हावा पर्याप्त सफा छ।
यो 1897 मा, 162.000 मान्छे Königsberg बस्नुहुन्थ्यो ज्ञात छ। नियमित नम्बर कलिनिन्ग्राद जनसंख्या यहाँ जबकि त्यहाँ 188 हजार नागरिक थिए, 1956 मा मूल्यांकन गर्न थाल्छ। त्यतिबेलादेखि बासिन्दा संख्या निरंतर वृद्धि, अलिकति गिरावट 1986 अवलोकन थियो। Kaliningradians संख्या कम 2000 देखि 2009 रेकर्ड थिए। कि पछि, फेरि बासिन्दाहरू संख्या मा वृद्धि देखेको। आज, 459 000 मान्छे छ जो कलिनिन्ग्राद जनसंख्या (2016), देश र विदेश अन्य क्षेत्रका सार्न सबैभन्दा आकर्षक ठाउँमा को छ।
हालैका वर्षहरूमा कलिनिन्ग्राद शहर को जनसंख्या प्रवासिहरु गर्न मुख्य रूप कारण वृद्धि। धेरै वर्ष को लागि शहर मा जनसंख्याको नकारात्मक प्राकृतिक वृद्धि रेकर्ड भयो। कलिनिन्ग्राद स्पष्ट जीवन वृद्धि को युरोप-विस्तृत प्रवृत्ति र यसैमा देखाउनुहुन्छ एक वृद्ध जनसंख्या। आज हरेक हजार सक्षम-bodied Kaliningradians लागि 722 असक्षम व्यक्ति (बच्चाहरु र वरिष्ठ) खाताहरू। यस्तो पेंशन को उच्च लोड कारक शहर बजेट लागि एकदम ठूलो समस्या सिर्जना र तिनीहरूलाई लागि समाधान पाइन्छ।
अर्थव्यवस्था र जीवनको गुणस्तर
स्थिर जनसंख्या वृद्धि सामान्यतया जीवनको राम्रो गुणवत्ता संग सम्बन्धित छ। कलिनिन्ग्राद, सामान्य, एकदम राम्रो मा आर्थिक अवस्था, मा हुनत वित्तीय संकट महसुस र उत्पादन कटौती अवलोकन छ। शहरमा बेरोजगारी आधिकारिक वरिपरि 1% छ, तर वास्तविकता थप, रोजगारी समस्या बेरोजगार विशेष गरी उच्च शिक्षा संग विशेषज्ञहरु लागि, उपलब्ध छन्।
कार र पोत, सेवा को रूपमा क्षेत्र राम्रो-विकास: शहर दुई प्रमुख कारोबार भएको छ। र अस्पताल, विद्यालय अवकाश सुविधाहरु को पर्याप्त नम्बर: त्यहाँ पनि राम्रो सामाजिक पूर्वाधार छ। तर नागरिक मा सडक विश्वास अतिरिक्त ध्यान आवश्यक छ, तर यो सबै-रूसी समस्या छ। कलिनिन्ग्राद मा सामान्य मा त्यसैले, यहाँ अन्य क्षेत्रका मानिसहरू गर्छन, जीवित को एक एकदम उच्च मानक उल्लेख र। यो कलिनिन्ग्राद जनसंख्या संख्या निरंतर सानो दर albeit, बढ्दै छ भन्ने तथ्यलाई तिर जान्छ।
साझेदारी सम्पत्ति राजधानी काम को। अनुपात: सूत्र
आन्तरिक वातावरण को विश्लेषण - एक प्रमुख व्यवस्थापन उपकरण
रूस मा आपूर्ति र माग विश्लेषण मुरब्बा उत्पादन
रकम प्रवाह। तयारी को विधिहरू
स्थिति - यो प्रतियोगिता बाट तर्काउन एक महान अवसर हो
मेट्रो टनेल। मास्को को महानगरीय
6 महिनामा सो बच्चा कति गर्नु पर्छ? मान्यता विकास
नवजातिका लागि पहिलो-सहायता किट
आफ्नो आमा मा स्तनपान
माफिया 2: सिस्टम आवश्यकताहरु र जारी मिति
Veet मोम स्ट्रिप्स - छैन depilation लागि मात्र एक माध्यम हो
प्लट, विचार र फिल्म "स्रोत कोड" को अभिनेता
उपचार लोक उपचार खोकी
प्यास्टेल पोर्ट्रेट: एक मास्टर वर्ग, फोटो
कसरी टमाटर मा चुम्बन गर्न सिक्न? एक जीवित व्यक्ति पहिलो चरण
Badyaga - पाउडर doest विचित्रताहरू